टर्कीमा जाडो छुट्टिहरू
स्की रिसोर्ट Uldag
विरोधाक स्की रिसोर्ट
माउन्टेन स्कीइ टर्की ?!
माउन्टेन स्कीइ। टर्कीमा यस प्रकारको मनोरञ्जन र पेशेवरहरूको दुबै नवीकरणहरू आकर्षित गर्दछ, किनकि यस देशमा उच्च वर्गको विश्रामको लागि सबै सर्तहरू सिर्जना हुन्छन्!
माउन्टेन स्कींग कुनै पनि जटिलता, सुरम्य धारणा र, पाठ्यक्रम होटल र रेस्टुरेन्टहरूको ढलान को रूप मा राम्रो छ।
स्की रिसोर्ट टर्कीमा धेरै जवान छन्। तिनीहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय Uludag, सीमानास, सरिकामाश, डेभिराज, कार्डनी हो।
ट्रान्सिलॉड ट्रान्सिलगुले "विशाल माउन्टेन" भनेको सरल र मध्यम कठिनाइको लागि सबैभन्दा आकर्षक बनाउँछ, जसले यसलाई पारिवारिक छुट्टी र शुरुआतहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक बनाउँछ।
रिसोर्ट राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित छ, 1 1700 किलोमिटरदेखि 44 34 किलोमिटर। यहाँबाट, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उलौडाग, बुर्सामा स्थेटी यातायात 400 मिनेटमा पुग्न सकिन्छ, र minutes0 मिनेटमा एयरपोर्टमा पुगि सकिन्छ।
uldags - रिसोर्ट फैशनेबल र महँगो छ, तर यस रिसोर्टको यो यात्राको बावजुद यो मूल्य स्तर भन्दा मूल्यवान छ।
जाडो ulldag एक उत्कृष्ट स्की रिसोर्ट हो, र गर्मीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत एक ठूलो अवसर छ। यहाँ एक वर्ष 120 दिन छनो मौसम छ। डिसेम्बर 20 देखि मार्च 20 मा आराम गर्न सब भन्दा उपयुक्त अवधि। जाडोको मौसमको सुरूमा, यी स्थानहरूमा एउटा सानो सुख्खा हिउँ छ, र अन्त्यमा - भिजेको छ।
दुःस्वरूप तपाई यहाँ बिहानसम्म उमाल्नुहुन्छ - निपटान, बारहरू, रेस्टुरेन्टहरू, नाइटक्लबहरू - तपाईंको सेवामा एक पूर्ण पार्टीको पूर्ण सेट। टर्कीप पप ताराहरू बोल्न मन पराउँथ्यो, युरोपेली सेलिब्रेटी द्वारा स्कीमा पेन्ट गर्न प्रेम। चाखलाग्दो मनोरन्जन कार्यक्रमहरूले बच्चाहरूको लागि पनि प्रदान गर्दछ।
perandoches टर्कीको सबैभन्दा कम स्की रिसोर्ट हो। एटोरोनमको पूर्वबाट ils किलोमिटर पश्चिमबाट km एमएमएमआफ्सको पूर्वमा km एमएमको पूर्वमा अवस्थित विद्युडोक स्थित। क्याटनिया क्षेत्र समुद्री सतह माथि 2,200-3 125 मिटर उचाईमा अवस्थित छ। सामान्य हिउँ कभर मोटाई2मिटर छ। क्षेत्रको मौसम महादेश हो, र जाडो मौसममा आवधिक रूपमा हिउँ पर्दछ।
: सक्रिय जाडो छुट्टिका फीत्वहरू यहाँ प्रदान गरिएको सेवाको स्तरमा छक्क पर्नेछ, जुनसुकै रिसोर्टले यस रिसोर्टलाई पारिवारिक बिदाको लागि उत्तम उत्तम रूपमा उत्तम रूपमा उत्तम रूपमा उत्तम रूपमा उत्तम रूपमा गर्दछ। स्केटिंग, किनमेल, रात डिस्को। रोजिंग र उत्साहजनक भ्रमणहरू अर्बोरम, ट्राबोजन र सारखाशीशको शहरमा।
टर्कीमा आरामलाई तातो मौसममा मात्र होइन। त्यहाँ अक्सर जाडोमा जान्छ। पौंडी को लागी पानी मा पानी पौडी खेल्न को लागी पानी पहिले नै चिसो छ, यद्यपि धेरै बाँकी छ!
हावा दिउँसो2डिग्री 20 डिग्रीमा समात्दै छ, बिहान र साँझमा 10 डिग्रीसम्म पुग्न सकिन्छ। तर दिन सनबर्नका लागि पनि धेरै सहज छ।
पाठ्यक्रम, जाडोमा, होटेल धेरै ध्यानपूर्वक छनौट गर्न आवश्यक छ। स्वाभाविक रूपमा केवल * *, राम्रो पूर्वाधारको साथ पोखरी, स्पा एस स्पा कन्ट्रोल द्वारा तातो।
र जाडो टर्की कूलिस्ट लक्जरी होटेलमा आराम गर्न उत्कृष्ट अवसर हो, जुन मौसममा कपडा पैसा खर्च हुनेछ!
र तल मैले सस्तो मूल्य भन्दा बढि उत्कृष्ट र चलाख विकल्पहरूको चयन गरेँ। यी होटलहरू कुनै पनि मौसममा जानको लागि योग्य छन्!
थोरै कार्य आमा बुबा र बच्चाहरूको लागि थोरै कार्य: टर्कीमा रहनु आवश्यक पर्ने चीजहरूको सूची बनाउनुहोस्। पौडीबर, सनडाई, स्यान्डल, पनामा ... किन कुनै स्की जुत्ता र जम्पुसुवी छैन?
किनभने जाडोमा टर्कीमा आराम गर्नुहोस् जबकि पर्यटकहरूको लागि नवीनतामा। एस्टेस्टेनका प्वाँखहरू सफा गर्न दिनुहोस् - टर्कीको हिउँद रिसोर्टहरू पहाडहरूमा अवस्थित छन्, जहाँ हिउँ झर्दै छ र शीतले झर्दै छ।
यदि तपाइँ स्कीइको आधारभूत कुरा मास्टर गर्न चाहानुहुन्छ भने, तर भीडबाट डराउँदछन्, यो पूर्वी देशलाई हेर्नुहोस्। हाम्रो समीक्षामा हामी टर्कीको उत्तम स्की रिसोर्टहरूमा हेर्नेछौं, जुन बच्चाहरूको साथ मनोरञ्जनको लागि उपयुक्त छ।
शारीरिक नक्शा खैरोको छायाँमा धनी हुन्छ - देशको महत्त्वपूर्ण भाग पहाड र प्लेटसाइटले समाहित छ।
उच्चतम पोइन्ट, भल्कोन एक ठूलो अरात हो, 5116565 मिटरको उचाई छ। तर अन्य हिमाल एरेन्सले पर्याप्त उचाइहरू पाउँदछन्। अक्टोबरमा, पहाडहरूमा अन्तिम घाटा सूर्यको मुनि हुँदा, पहाडहरूमा अझै हिउँ र डिसेम्बरको मोटाइमा हिउँ र डिसेम्बरको मोटाइमा पुगिसकेका छन्।
<< p> यस्तो स्रोत डेटा भएको, तपाईं स्वतन्त्र रूपमा प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, टर्की स्की रिसोर्टहरू
। पर्यटन को दिशा यति धेरै पहिले विकास गर्न शुरू भयो, तर अन्तर्निहित टर्कीट होटेलहरूको साथ आरामदायी बसोबास र प्रशस्त खाना प्रदान गर्न।
<< P> टर्की स्की होटल सबै समावेशी प्रणालीमा सञ्चालन गर्दछ, जुन बच्चाहरूको साथ अभिभावकहरूको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ, जुन पहिल्यै वयस्कको खानामा सर्दै छ। एकै साथ, तपाईको आफ्नै आफन्त कुनाकाउन सम्भव छैन, किनकि त्यहाँ कुनै भाँडा अपार्टमेन्टहरू छैनन्। सामान्यतया, टर्कीको स्की रिसोर्टहरू केवल केही होटलहरू मात्र, उच्च वर्गको रूपमा छन्।
व्यावात र देश रिसोर्टको ट्रेलहरूको गति र गुणस्तर अस्ट्रियाको हीन छ। तर दायाँ एक पहाड स्की रेकपिंग गर्ने निर्णय हुनेछ: धेरै पेशेवर प्रशिक्षकहरू रूसी भाषाको स्वामित्वमा छन्, र कोमल ढलानहरू पहिलो कसरतको लागि उत्कृष्ट जमिनल हुन्।
स्की टर्की एक सुखद पक्ष र स्नोबोर्डरहरूको साथ खुल्छ। सीमाहरूको लागि राम्रो प्राकृतिक अवस्थाको अतिरिक्त, एक उत्कृष्ट हिउँ-पार्कले अस्ट्लिसकीहरूको सहभागितामा सिर्जना गरेको छ।
तथापि, केटाकेटीका लागि टर्कीमा यस्तो शीतकालीन मनोरञ्जन पार्कहरू छैनन्, जर्मनी, चेक गणतन्त्र वा स्लोभाकिया। तर तपाईं साल्ड्रेडिंगमा सवारी गर्न सक्नुहुनेछ र जताततै स्नोबलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ।
<< p> एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी: स्की रिसोर्टमा मौसमले चाँडै तपाईंको विचारहरूलाई न्यानो देशको रूपमा टर्कीको बारेमा हटाउँदछ। त्यसो भए, डिसेम्बर मा हावाको तापमान - फेब्रुअरी-फेब्रुअरीमा - 10 ° F दिन माथि र माथि - 20 डिग्री सेल्सियससम्म
स्पष्ट देशको पूर्वमा पहाडहरूमा सबै कुरा, पश्चिमको मौसम अलि अलि कम नरम छ। त्यसोभए यदि तपाईं टर्कीको लागि जाडोको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईं एक विशेष रिसोर्टको मौसममा उपयुक्त हुनुहुन्छ।